घातक रोगका लागि “एशियन क्रिटिकल केयर” - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
काठमाडौं, ८ माघ । एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले स्वास्थ्यमा कुनै गडबडीको कारण आइपर्ने गम्भीर रोगको उपचारमा भार नपरोस भन्ने उद्धेश्यले विभिन्न प्रकारका घातक रोगहरु विरद्ध बीमा सुरक्षा योजना ल्याएको छ । कम्पनीले क्यान्सर सहित १८ प्रकारका घातक रोगहरु विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान गर्नको लागी “एशियन क्रिटिकल केयर” पुरक करार सार्वजनिक गरेको हो । उक्त सुविधाबाट बीमितले क्यान्सर, हृदयघात, मस्तिष्क घात, किड्नी फेलियर, कोमा लगायतका १८ प्रकारका घातक रोग मध्ये कुनै पनि एक घातक रोग निरुपण भएमा उपचार खर्चवापत एकमुष्ठ रु. ५० लाखसम्म भुक्तानी पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो सुविधा मूल बीमालेखमा ऐच्छिक सुविधाको रुपमा समावेश गर्न सकिनेछ । यो योजनाले १८ वटा घातक रोगविरुद्धको रक्षावरण गर्छ । यो योजना अन्तर्गत बीमितले रु. ५० लाख सम्मको एकमुष्ठ बीमा रकम प्राप्त गर्नेछन् । यस योजना अन्तर्गत बीमितले बीमाको रकम लिन अस्पतालको बील पेश गर्नु पर्दैन । बीमाङ्क रकम रु. ५० हजारदेखि रु. ५० लाखसम्म रहने छ । यस योजनामा १६ वर्ष उमेर पुगि ६० वर्ष ननागेका समावेश हुन सक्नेछन् ।
हाल सम्म यस कम्पनीले २९ वटा शाखा र ७९ वटा उपशाखा गरी १०८ वटा कार्यालयमार्फत् सेवाग्राहीलाई घरदैलोमा बीमा सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । कम्पनीको हाल अधिकृत पूँजी रु. पाँच अर्ब रहेको छ भने चुक्ता पूँजी रु. एक अर्ब २५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीमा पुस मसान्तसम्म करिब रु. १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा कोष रहेको छ ।
आगामी बजेटमा व्यवसायीको सुझाव –‘ करको दायरा घटाईदिनु पर्यो’
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत सहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर